चार भाइको प्रतिस्पर्धा, बाजुरामा को बन्ला सभापति ?
बाजुरा– नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनकोे कार्य तालिका सार्वजनिक भएसँगै पालिका, क्षेत्र तथा जिल्लामा अधिवेशनको चटारो सुरू भएको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको दाबी गर्दै जिल्ला जिल्लामा आकांक्षीले आफ्ना अभियान चलाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिमको बाजुरामा आसन्न अधिवेशनका लागि आकांक्षी खुल्ने क्रम सुरू भएको छ । बाजुरा कांग्रेसको सभापतिमा यस पटक चारजना को प्रतिस्पर्धा हुने कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ ।
यस पटक बाजुरामा नेता मान बहादुर रावल, पदम शाही, कविराज पण्डित र रामसिंह रावलले सभापतिको आफ्नो परीक्षा लिँदै छन् । जानकारका अनुसार सुरू मै बहुमत जुटाउन सक्ने संभावना कम छ । प्रतिस्पर्धी मध्ये कविराज पण्डित वर्तमान कार्य समिति सभापति पनि हुन् । मान बहादुर रावल पूर्व सभापति तथा संविधान सभाका उम्मेदवार हुन् भने जनआन्दोलनका घाइते र जुझारु नेताका रूपमा चिनिने रामसिंह रावल अघिल्लो अधिवेशनका सभापतिका प्रत्यासी हुन् । जिल्ला कांग्रेसमा लोकप्रिय र मिलनसार छबि बनाएका पदम शाही महासमिति सदस्य हुन्, उनी प्रदेश सभाका उम्मेदवार पनि हुन् ।
जनक गिरीले जसलाई काँध थाप्छन् उनै सभापति !
पहिलो राउण्डबाट दोस्रो राउण्डमा मान बहादुर रावल र कविराज पण्डित पुग्ने बलियो संभावना छ । दुई जनाबीचको प्रतिस्पर्धामा पछि कसले कसलाई समाधान गर्छन् भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
जिल्लामा कांग्रेस नेता तथा पूर्व सहायकमन्त्री जनक गिरी र बद्री पाण्डेयले जसलाई समर्थन गर्छन उही नेताले बाजी मार्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म उनीहरूले संकेत देखाएका छैनन् । मान बहादुर रावल र रामसिंह रावल पौडेल पक्षका हुन् भने कविराज पण्डित र पदम शाही देउवा पक्षका मानिन्छन् । त्यसैले पनि कोही नेता पनि समर्थनमा खुलेका छैनन् ।
सबै उम्मेदवारलाई हेर्दा मान बहादुर रावल केही बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका कविराज पण्डित लोकप्रिय त छन् तर यसभन्दा अगाडि पण्डितले चुनाव जित्नुमा पहिले एउटा नगरपालिका बडिमालिका नगरपालिका मात्र रहेको र अरू गा.वि.सको जति भोट बडिमालिका कै हुँदा फाइदा उठाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
अहिले चार वटा नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका भएको कारण त्यो संभावना टरेको छ । मान बहादुर रावल यस अघिका तीन वटा अधिवेशन जितिसकेकाछन् । उनको आफ्नै लिगेसी रहेको तर देउवा समूह विभाजित देखिँदा उनको संभावना बलियो ठानिएको छ ।
रोचक प्रतिस्पर्धा र समिकरण रहेको बाजुरामा भूमिका खेल्ने पूर्व सहायकमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गिरीे सामिप्यता हेर्दा अहिलेसम्म मान बहादुर रावलसँगै आएकाले यस पटक पनि उनले रावललाई नै समर्थन गर्न सक्ने अनुमान छ ।
बद्री पाण्डेय र अंगराज तिमिल्सिना नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला अध्यक्ष लड्दा देखि बद्री पाण्डेयलाई मान बहादुर रावलले समर्थन गरेका थिए, तसर्थ पनि पाण्डेयले त्यो गुन तिर्ने लाइनमै जान्छन् भन्ने विश्लेषण छ । उनीहरू अगाडि देखि नै एकै ठाउँमा छन् । पाण्डेय मात्र हैन हालसम्म नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष बनेका नेत अधिकांश रावलले स्थापित गराएका नेता मानिन्छन् ।
अर्को संभावना अर्को दुई पटकसम्म प्रतिनिधी सभामा विजयी देवराज जोशी र मान बहादुर रावलको पालिका एउटै हो । भोलि देवराज जोशी चुनाव लड्ने अवस्था आए रावलको समर्थन आवश्यक रहने स्वार्थ राख्नसक्छन् । जोशी जिल्लामा मान बहादुर रावल र पदम शाही भन्दा बलियो राजनीति संभावना भएका नेता भएकोले उनी रावल र शाहीले समेत मान्ने नेता भने हुन् ।
२९ असार २०७८ १६:३९